मोबाइल मार्केटिंग: जियोटोको
बुधबार, फेब्रुअरी 2, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब म उद्योगमा साथीहरूसँग कुराकानी गर्न समय लिन्छु, मँ सँधै नयाँ र अचम्मका उपकरणहरूको बारेमा जान्छु। आज म प्याट कोयलसँग कुरा गर्दै थिएँ। प्याट प्रीमियर चलाउँछ खेल मार्केटिंग एजेन्सी, कोयल मिडिया। उसले साझा गर्‍यो जियोटोको मसँग - एक वास्तविक समय स्थान आधारित मार्केटिंग र विश्लेषण मंच।
यो पर्याप्त प्रभावशाली उपकरणसेट हो, मार्केटिंगको क्षमताको प्रयोग गरेर फोरस्क्वायर, twitter र गोवाला संग फेसबुक स्थानहरु बाटोमा। अब त्यो गुगल स्थानहरू चेक-इन थप गरिरहेको छ, म पक्का छु कि त्यो क्षितिजमा पनि छ!
यहाँ जियोटोको साइटबाट केहि हाइलाइटहरू छन्:
बहु स्थान-आधारित प्लेटफर्महरूमा पदोन्नतीहरू निर्माण गर्नुहोस् - जियोटोकोको सजीलो गर्न-प्रयोग अभियान विजार्डको साथ, तपाईं मिनेटमा नै फोरस्क्वायर, फेसबुक स्थान र गोवालाको लागि आकर्षक स्थान-आधारित पदोन्नतिहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रत्यक्ष भिजिटर ट्र्याकिंग र हीट नक्शा टेक्नोलोजी - शक्तिशाली वास्तविक समय स्थानमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् विश्लेषण, प्रयोगकर्ता चेक-इन व्यवहारको विश्लेषण गर्नुहोस् र Geotoko को हीट नक्शा प्रविधि प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धी बुद्धिको एकत्रित गर्नुहोस्।
एकै स्थानमा बहु स्थानहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् - सजिलैसँग एक शक्तिशाली प्लेटफर्ममा हजारौं स्थानहरू अपलोड र प्रबन्ध गर्नुहोस्। हामी स्वचालित रूपमा फोरस्क्वायर र फेसबुक स्थानहरूमा तपाईंको स्थानहरू मिलाउनेछौं।
टैग: भौगोलिक अभियानभौगोलिक मोबाइलभूगोलभौगोलिक स्थानभौगोलिकgeotargeting
दैनिक: डिजिटल समाचार पुनर्जागरण
फेब्रुअरी १,, २०११ 2:१:2011 अपराह्न
राम्रो लेखन को लागी धन्यवाद, डग। र हो, गुगल स्थानहरू केहि दिनहरूमा आउँदैछ।
तपाईं शर्त, Pallian! प्याटले भन्यो तपाई मान्छे भ्याकुवरमा पनि छन्। म वास्तवमा मा हाई स्कूल गएँ अमेरिका फिर्ता जानु अघि। मेरा शीर्ष3शहरहरूमा!
मैले भन्नु पर्ने छ कि भिडियो डेमो हेरे पछि, म यो अनुप्रयोगको सरलताको साथ धेरै प्रभावित छु। म उनीहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धी को हो भनेर निश्चित छैन तर यो निश्चित खाताहरू समग्र गर्न र अभियानहरू र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र व्यवस्थापन गर्न एक एकल समाधान प्रस्ताव गर्न एक मजबूत व्यापार केस हुँदैछ। त्यहाँ बस्टन बाहिर एक अर्को स्टार्टअप छ कि म अफिटरलोकल भनिन्छ सोच्न सक्नुहुन्छ जुन धेरै समान छ। यसमा पनि हेर्नुहोस्। राम्रो समीक्षा, डग।